Soomaaliya, 01 October 2019
Shirka Madasha Iskaashiga oo Muqdisho ka furmay
Magaalada Muqdishu waxaa maanta ka furmay shirka caalamiga ah ee Iskaahsiga Soomaaliya iyo Beesha Caalamka, kaasi oo la sheegay inay ka qaybgalayaan wakiillo matalaya ilaa 50 dawladood.
Jubaland oo qaadacday shirka ka furmay Muqdisho
Mareykanka oo duqeyn cusub la beegsaday Al-Shabaab
Wasiirka difaaca oo ka hadlay la-dagaalanka Al-Shabaab
AFRICOM: Khasaare nagama soo gaarin weerarkii Ballidoogle
Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarkii ay Al-Shabab ku qaaday saldhigga Ballidogle aan wax khasaare ah dhimasho iyo dhaawac kasoo gaarin ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaalida.
Danab: "Waa la laayey Shabaabkii soo weeraray Ballidoogle"
Taliyaha Danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeni-qaar oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay inaan waxba ka badbaadin maleeshiyada Al-Shabaab ee maanta weerarka kusoo qaaday garoonka Ballidoogle.
Xildhibaan Cabdirisaaq: Al-Shabaab waxay ka faa'iideysaneysaa khilaafka
Wasiirkii hore ee amniga qaranka ee Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in weerardan soo noqonqnaya ee Al-Shabaabka ay muujinayaan in ururkaasi uu ka faa'iidaysanayo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira.
Yamamoto oo ka hadlay weerarka Ballidoogle
Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa soo saaray war -axaafadeed ku saabsan weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga garoonka Ballidgogle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada Talyaaniga oo qarax lagula eegtay Muqdisho
Qarax baabuur ayaa maanta Muqdisho ku bartilmaameedsaday kolonyo milatri ah oo ah ciidamo Talyaani ah oo maraysay meel u dhow Kulliyadda Jaalle Siyaad.
ILEYSKA VOA: Muranada Guryaha ee Soomaaliya
Al-Shabaab oo weeraray saldhigga garoonka Ballidoogle
Wararka ka imanaya Gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in laba qarax lagu weerayay garoonka diyaaradaha Ballidoogle oo saldhig u ah ciidamada Maraykanka ee tababara ciidamada dawladda Soomaaliya.